Wasiirada arimaha dibadda ee IGAD oo ku shiray Nayroobi – Radio Daljir
Maarso 1, 2013 10:37 b 0
Nayroobi, March 01- Magaalada Nayroobi ee caasimadda dalka Keenya waxaa maanta oo jimce ahayd ku shiray wasiirada dalalka ku midoobay urur goboleedka IGAD.
Wasiirka arimaha dibadda ahna Ra?iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya marwo Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa ka qaybgashay shirkaasi ay isugu yimaadeen qaar kamid ah wasiirrada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD.
Kulanka wasiirada ayaa inta badan waxaa lagu jeex jeexay sidii dalka Keenya ay oga dhici lahayd doorasho xasiloon oo aysan ka dhalan rabsho iyo dagaalo.
Wasiirada ayaa xukuumadda Nayroobi iyo shacabkuba ku booriyay dalka inaysan ka dhicin doorashooyinkii 2007-dii iyo 2008-dii oo caalamku uu xasuusto dhacdooyinkii ka dhacay dalkaasi, ka dib markii doorashada ay ka biyo diideen tartamayaashii xiliggaas hadana ah madaxda dalka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Prof. Sam Ongeri ayaa sheegay in dawladdu adkaysay amniga iyo hannaanka doorashada, islamarkaana ay doorashadu ku dhammaan doonto si nabadgalyo ah, isagoo wadamada gobolkana uga mahad celiyay taageerada ay siinayaan Kenya.
Sidoo kale wadamada ku jira urur goboleedka IGAD ay kaalin mug leh ka ah dhismaha maamul goboleedka Jubbaland.